RAVELONANOSY MAMITIANA : AMPIHARO NY FANAPAHAN-KEVITRAREO SADC ARY SAZIO IZAY MITSIVALANA AMIN’IZANY – MyDago.com aime Madagascar
Rehefa tena mandeha ilay fampielazankevitra alohan’ny fotoana hoy ny Ct Ravelonanosy Mamitiana teny amin’ny Magro Behoririka androany dia tena milaza ny hevin’ny zandry kely. Dikany hoy izy dia n’inon’inona lazaina eto Madagasikara dia tsy maintsy tohizany ny lalan-kely sy ny fifidianana fa atao tsinontsinona ny vahoaka Malagasy satria tsy misy ilana azy ny fampihavanana, ny famoahana ny gadra politika ary mbola hampidirina ihany koa izay tsy mitovy hevitra ka ho atao ny fifidianana. Raha ho atao hoy Mamitiana io fifidianana io, ka mahita vola any amin’ny Qmm, ny Wisco dia tantanan’ny tsy miankina. Ahazo fankatoavana iraisam-pirenena ve izany hoy izy ary ahoana ny fahantran’ny vahoaka Malagasy. Momba ny fitokanana nataon-dRajoelina tany Antsiranana dia nambarany fa tena mazava tokoa ve ny vola nanatanterahana izany fa eto tsy misy fitsipika hitantanana ny tetezamita fa izay fifanarahana any ambadika any no hitondrana ny tetezamita. Volan’ny Malagasy tsirairay hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity, no hanasoavana ny rehetra no hanaovany izany. Ny hopitaly dia tsy misy dokotera, tsy misy fanafody kanefa hopitaly manaram-penitra no atao. Tena voky lainga ny vahoaka. Mitodika amin’ny fivorian’ny Sadc isika hoy Mamitiana, ary mitondra am-bavaka izany. Matoa mahomby izao tolona izao dia satria efa-taona tsy nahazo fankatoavana ny fat. Eo am-pamaranana ny tolona isika hoy ity mpanao politika ity, ka izay no hitondrana am-bavaka azy. Na eo aza ny tsy fanatanterahana ny tondrozotra dia mitana ny heviny hatrany ny Sadc ary tsy ahazo fankatovana ny mpanongam-panjakana. Tsy matahotra fifidianana isika hoy izy ary tsy mandala ny demokrasia ireo fa matahotra ny filoha Ravalomanana Marc ho lany 1er tour. Manantena isika hoy Mamitiana, fa hisy fehinkevitra avoakan’ny Sadc hampodiana an’I dada. Ampiharo ny fanapahan-kevitrareo ary sazio izay mitsivalana amin’izany. Ao amin’ny tondrozotra hoy izy dia tokony tsy hisy ny fifidianana eto raha tsy tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc. Misy ny fampihavanana vao miroso amin’ny fifidianana isika. Izany no tanterahantsika hoy ity mpikambana ao amin’ny Ct ity dia satria ity krizy ity dia miverimberina. Andeha atao hoe hiroso ny fifidianana hoy Mamitiana kanefa izao aza izy manohana ny fitondrana tsy mifampatoky. Ny antsika hoy izy dia ny ara-dalàna ihany ka ny fampiharana ny lalàna velona eto amin’ny firenena. Ny mpanongam-panjakana tsy mba mihaino anatra. Efa miteny ny sehatra iraisam-pirenena hoe raha tsy mody eto ny filoha Ravalomanana Marc tsy misy zavatra vanona eto kanefa mbola tsy mihaino ihany. Nambarany fa isika tsy nanao tolona an-terisetra fa nanavotra ny firenena teo am-pelantanan’ny mpanongam-panjakana. Noho izany hoy Mamitiana dia manainga antsika rehetra ho tonga maro amin’ny Sabotsy izao. Tsy hanatevina ny hetsika fotsiny fa hanampy ny filoha Ravalomanana Marc amin’ny ezaka ataony any ivelany. Hisy hoy izy ny fanambarana lehibe amin’io fotoana io indrindra fa ny hevitry ny Ankolafy Ravalomanana mahakasika ny raharaham-pirenena ka ny i Dada mihitsy no ilaza azy. Ny fampielazankevitry ny filoha Ravalomanana Marc ataontsika hoy Mamitiana, dia ny fahatongavantsika maro.
Auteur Solo Razafy*Publié le 4 décembre 2012 4 décembre 2012 Catégories Politique
22 pensées sur “RAVELONANOSY MAMITIANA : AMPIHARO NY FANAPAHAN-KEVITRAREO SADC ARY SAZIO IZAY MITSIVALANA AMIN’IZANY”
DIA MBOLA MISY DIKANY VE IZAO IKIKA NAREO IZAO R I MAMITIANA .
FOHAZO NY VAHOAKA HOY AO.
@ fomba ahona Mamitiana a!!
fa tsy efa ho herin-taona mahery ve ianareo izao no tao ???
Aiza avy ilay nanao Sonia ??adalan’i dadabe Zafy ve niala moramora??isika ihany anie no
NITAPIKITRA dia Aiza e!!!nefa tokony ho rava tanteraka io tetezana io raha niala aloha koa
isika , raha nanaraka an’i P. Zafy. Izao efa TARA!!!!efa nipetraka ilay » FITIA » , efa ripaka ny
VAHOAKA sy ny OMBY any ATSIMO, efa POTEPOTIKA ny TANINDRAZANA, dia MAHAIZA
MIONINA TOMPOKO fa SAFIDIN…………..tsy haiko )izao fa mino aho fa tsy ny VAHOAKA kosa
aloha no NANAPAKA nanao KISONIA tany e!! tsy nisy FIERANA akory .
5 décembre 2012 à 1 h 29 min
5 décembre 2012 à 6 h 01 min
IZAY VITA DIA VITA ARY FANTATRA ANIE FA HISY FOANA NY FIFIDIANANA HATAO AMIN’NY TSY ARA-DALANA E – AOKA ALOA ISIKA TSY HIFANOME TSINY LAVA ETO FA HO HITA EO NY HIAFARANY – IZAY MANAO ALOHA AOKA HITOHY – FA RAHA TSY MISY N’IZA N’IZA KOA DIA AHOANA ? MATOKIA NY AO AMBONY IRERY IHANY RE TOMPOKO O !
seza io tsy maintsy ifikirana! Ravalomanana no atao hirahira hipetrahana eo! fa raha tena te hanao, aleo tsorina fa be ny zavatra azo atao…
io no lazaiko amin’ny olona aty Ampita be menomenona hoe simba ny firenena hoe : fa inona no ataonao mba tsy ahasimba azy?
« AMPIHARO NY FANAPAHAN-KEVITRAREO SADC, ARY SAZIO IZAY MITSIVALANA AMIN’IZANY » !!
Inona moa no azon’ny SADC atao, raha ianareo aza no mbola miteny hoe « Misy ny fampihavanana vao miroso amin’ny fifidianana isika » ?
Inty no tena gaigy : » Matoa MAHOMBY izao tolona izao, dia satria efa-taona tsy nahazo fankatoavana ny fat » !!!
Fa iza aloha amin’izao fotoana izao no tena mijaly fadiranovana ê ? Ny fat sa ny vahoaka ? Tsy raharahian’ny maloton’ny faty izay fankatoavana any ! Olona efa maty eritreritra io, fa ny vahoaka no mijaly amin’ity fitavozavozanareo ity ! Ny fat sy ireo manodidin’azy mitàvana, manao ampihimamba ny harenam-bahoaka, efa nahavita nametraka vola amin’na miliara etsy sy eroa, sady mbola mahavita mikawitry amin’ny sokatry be !
Impiry ianareo no efa nolazaina fa tokony hitsangana ? Atramin’izao toa mbola mandrimandry sy mitafatfa eo ambony divà ihany !
Amin’izay indray tsy mba ny zavatra tokony resahina no aroso fa resaka tsy hay be ihany. Mba omeo fanazavàna ny vahoaka momban’ny famarotana an’ilay fiaramanidina AF II ! Aiza ny vola satria ianareo anisan’ireo nandany an’ilay teti-bola 2013, satria hono efa tafiditra tao ny vidin’ilay izy ?
Ilay nanao sonia tokony hilaza ny marina amin’ny vahoaka hoe, « noterena sy nanaovan’ny sasany santazy izy matoa nanao sonia » !
Ary rehefa natao ihany ny fanaovan-tsonia dia mba takiana ny fampiaran’azy !
Firy taona izay ny fanonganam-panjakàna, ary firy volana ny nanaovan-sonia ?
Feno hevitra mifanipaka na contradictions, toa io resak’Ingahy Ravelonanosy io ny zavatra atao rehetra !
Aza manantena zavatra mahafam-po avy any amin’ny SADC, rahatoa ka ianareo milaza ho tan-dalàna aza tsy mihetsika ! Matoa ny CI tsy miraika dia mihevitra ry zareo fa METY AMINAREO izao toe-javatra izao !!
Firy dia firy ny andin’ilay tondrozotra tsy tanteraka sy voahitsakitsaka, KANEFA IANAREO TSY MISY MITENY ?
Aiza izao ilay fitoriana lazaina fa ho atao ao anatin’ny 72 ora ? Ianareo hitory, kanefa milaza fa tsy maintsy atao NY FIARAHA-MITANTANA TENA IZY, ary TSY MAINTSY MISY NY FAMPIHAVANANA !!! Mbola fiaraha-mitantana sy misaosy miaraka amin’ny MPAMONO OLONA IHANY VE NO HO TOHIZANA SATRIA TSY MAHATOKY AN’ILAY FANAMBARÀNA NATAON’I SARLA IANAREO ?
Ny mampalahelo dia miady irery marina ny Filoha Ravalomanana, ary SOA IHANY FA MBOLA EO IREO OLONA VITSIVITSY TENA MANAMPY AZY, na ao an-toerana izany na any ampita !
Izao no tena hoe « loin des yeux, loin du coeur », ary miampy an’ilay hoe « raha ho faty aho, matesa rahavana » ê !
Raha tena tia tanindrazana sy tan-dalàna , ary vonona hiaro an’izany demôkrasia izany ny malagasy, dia tsy tokony hanaiky an’izany fiaraha-mitantana izany intsony !
MITSANGÀNA AMIN’IZAY, ARY TAKIO TENA TAKIO NY FANANTANTERAHANA AN’ILAY TONDROZOTRA ARA-BAKITENY !!
TAKIO AMIN’NY SADC SY NY CI NY FANASAZIANA AN’IREO MPANONGAM-PANJAKÀNA ! BE LOATRA NY RATSY NATAON-DRY ZAREO !
Fa maninona moa no ianadrasana ny sadc ny fanasaziana ireo olona ireo e? tsy izay ve no nandasana taminy nandritra izay fotoana rehetra izay?
Tsara hiverenana kely angamba ny hoe, maninona no ny SADC sisa no lasa tompon’andraikitra, na dia nahatsapa sy niaiky daholo ny rehetra fa nisy marina ny fandikan-dalàna sy fanonganam-panjakàna !
Satria nihevitra ilay firenena izay nanohana an’ireto mpanongana, fa mora ahodina kokoa ry zareo ao, mora vidiana !
Tsy izy rehetra akory no voajono tamin’izany, fa mbola eo ireo izay tena manampy sy miaro ny vahoaka malagasy, ary miezaka ny hiaro ny ara-dalàna satria sarotra ihany izany hoe hiaro mpanongam-panjakàna izany ! Vao tsy nanaraka an’izay nifanarahana (Maputo) ny « SADC » dia niandry hetsika avy amin’ny malagasy !
Saingy indrisy, betsaka ny tsy nahatakatra na koa, vonona hanao an’izay tokony ho atao !
Tsy nivoaka ho azy amin’izao fotsiny ny fanambaràna nataon’i Louis Michel vao tsy ela iny, FA HAFATRA ho an’ny SADC SY ILAY « FIRENENA IRAY » ihany koa !
Ny SADC dia VONONA NY HANAMPY, fa anjaran’ny malagasy no MILAZA IZAY TENA TADIAVINY, ary efa hatry ny ela ry zareo no NIANDRY AN’IZANY !!!
Tsy mba re ny mpiaro ny ara-dalàna raha nisy nilaza ry zareo avy ao amin’ny SADC hoe, mizara roa ny malagasy ! Ao ireo izay manohana mafy ny mpanongana indrindra fa ireo miaramila,ka tsy manaiky ny hiverenan’ny Filoha Ravalomana. Ary ao koa ireo mitaky ny ara-dalàna fa toa « MIHIDY AO AMIN’IZANY MAGRO IZANY » RY ZAREO, ARY TOA OLONA VITSY KELY HONO !! Vitsy ihany koa ry zareo na ao amin’izany CT sy CST izany, na koa ao amin’ny governemanta !!
Fanontaniana : Firy isan-jatony marina ny tena mpiaro ny ara-dalàna ? 5% ve ?
Hihaona any Tanzanie i Ra8 sy RaJ
Vokany : samy miala zanako toy ny filazan’i Môpera.
Inona sisa antenaina ?
Hoy aho : ho tonga ny dat fifidianana ary Ra8 tavela any Johannesbourg.
Ho avy ny hatezerana.
Iza moa no mampikatso ny fanantaterahana ny tondro-zotra ?
Dia nisy fihaonan’ny SADC tany Prétoria ny faran’ny volana avril 2012…Izay nanapaka fa ao anatin’ny roa volana manomboka ny 18 septembre 2012 dia tsy maintsy hampiarina tanteraka ny feuille de route ….Tsy tanteraka izany ,dia misy indray feo mandaha fa :
-hampihaonana ny Filohan’ny Firenena sy irajoelina any Tanganika
-talohan’izany dia niaraha – nihaono ny Filohan’ny Firenena Isika tamin’ny Asabotsy voalan’ny volana décembre 2012 izay nilaza fa hivry ny SADC aùin’ity erinandro diavintsika ity ,izay hanao fanambarana ary ho hampitan’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA Amintsika izany..
-androany dia nisy » communiqué » navoakan’ny Conseil de Sécurité et de Paix ao amin’ny Union Africaine izay fintinina ta izao ;
« Voatery haka fana-m-paha-kevitra ny CSP tsy hanaiky ny
fandraisan’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MArC sy i rajoelina anjara amin’ny fifidianana raha mbola mitohy izao fanantsakanana misy eo amin’ny fanantaterahany tondro-zotra !..
Ny mahatalanjona dia nahoana ny CSP tsy nanosika ny fampiarana tamin’ireo mpanongam-panjakana ny Accords de Cotonou !
IO RANGAHY TSOTRA ASAIVO MITENY I DADA HOE MIALA IANAREO CT CST MINISTRE DE MIALA IZAHAY NA IZAO DE IZAO REHEFA IZAY NO HITANY FA VAHAOLONA FA IANAREO SADY TSY MANAO N’inoninona fa mitsekera amin »ny internat fotsiny tsy mitondra vahaolana akory
Eh moa izato izy koh! samy mitovy ihany isika,samy mitsikera dia vita,
efa tsy tafavoaka ve ny baolina vao Mody hoe……….sao dia tsy mety,
ny antony no mba endrasanay FANAZAVANA raha misy fa aza mba manao an’izao fa manalabaraka an’i
dada, tsy mendrika ny ho zanany mihintsy izao.
Misy ny lesoka matoa ny olona miteny ary efa tsy takona hafenina intsony ilay fahavoazana TOMPOKO ô!!
Ataoko fa nametraka fahatokisana taminareo i Dada dia tokony mba TANTERAHANA izany fa tsy harirarira
lava izao ilay olona efa TROTRAKA .
Izay Gona a!Ny mpitondra anareo mihintsy SINTOMINA kely ny SOFINY na AHITSY fa mitongilana be ary
@ FOZA.Izay angamba no vahaolana hafa mety.
Hiaona hanao inona ??handady @ domelina hoe « avelao aho hody ??? »
Raha hiresaka ilay FANAMBARANA nataon’i Charles dia MIAIKY aho,
fa ny ankoatra izay kosa ataoko fa FANALAVANA ilay fotoana fotsiny, Amiko aloha an!!
Fa maninona no tsy mitady lalana vao2 @’io efa (VIDEO ) fanambaran’i Charles io e???
Izy aza efa vonona ???TSY HAIKO E!!SADC anie efa hita fa MISABAKA e!!!mbola misy
hantenaina ihany ve @’ireny olona ireny e???MIJALY RE NY VAHOAKA TOMPOKO isany ô!!
Io Gona sa Gena io anie, tsy dia olona mazava ry ranavalona ê !
Raha tena mpiaro ny ara-dalàna tsy hiteniteny foana tahak’izao ! Raha tena CT na CST io na koa ministra, dia anisan’ny mpihinambolam-bahoaka fotsiny !
Anisan’ireo tsy handihy ary tsy hanao tsianjery hoy ianao izay, fa toa be kiredy anefa !
Tsy ho ela ny fahafahana ê ! Aza taitra ianao ranavalona !
Fombafomba ihany no manontany hoe: rahoviana ny fahafahana?
Izahay efa tsy taitra,
ny resaky ny adolescent aty amin’ny tanàna izao?: tokelaka isa-bodi-rindrina MDR LOL mampita ity vaovao ho an’ireo tsy nahita visa « A » en public
==> sarin’i Andry Radomelina ray aman-drenin-dry fakahan-tahaky ry : Tanora Denise Peuples Malgaches Rabe Bogor … pseudo Sinoa Karana Arabo (amin’ny alphabetany) sisa no tsy ao an-doha heniky ny 3V isany
ity izy tratra am-bodin’omby : milalao MANAPOTSIPOTSITRA AKOBON’AMPELA na ny eo aloha na ny ao aoriana samy fanafinaretana vita ho AZYny petapetahiny avokoa
Valim-panontanianao ry HoAiza : Fantatrao tsara angamba fa rehefa tiana hitsangana irery ny zazakely, dia tolorana tanana ! Manolotra (manome) tanana an’ny vahoaka malagasy ny SADC, koa mba hitsangana irery AMIN’IZAY VE sa dia miandry bataina lava izao ?
Hisy fanambaràna izay ho ataon’ny solotenan’ny Vondrona eraopeana hono androany ! Mino aho, fa izay voalazan’Ingahy Louis Michel farany teo no hamafisiny !
Hisy ihany koa fanampahin-kevitra izay ho raisin’ny SADC ! Tsy hifanipaka velively amin’izay TAKIAN’NY VONDRONA ERAOPEANA io ! Marihina etoana fa na dia tsy misy feo firy aza avoakan’ny frantsay, dia efa mba niova ny fomba fijerin’ireo mpitondra ankehitriny ; marina fa mbola betsaka ireo olona izay nitakosona tamin’ny foza, any ka mbola manaraka eny ihany ity fofon’amôniaka !
TOKONY HANDRAY ANDRAIKITRA AMIN’NY FIZOTRAN’NY TANTARANY AMIN’IZAY NY VAHOAKA MALAGASY ; INDRINDRA FA IREO IZAY MBOLA MINO SY MANANTENA FA NY FANAJÀN’NY REHETRA NY LALÀNA, NO HITONDRA NY FIRENENA ANY AMIN’NY FAHAFAHANA SY FANDRIAMPAHALEMANA, ARY KOA FANDROSOANA !
aza be resaka fa i dada tsy ho avy zany e! nenay rajoelina ihany fa manofinofisa eo tenisany zanak’i dada reo,nenay no mahavita zavatra fa tsy otratenisan mitanandro ao amin’ny magro ao, miesona fotsiny ao, ny ekipatenisany ary efa lasa
nareo tena vendrana raha samy olona ka, tsssssss
Mahonena itony taranak’alika di
Misaotra Kiantana @ fampitam-baovao a!!
Tohizo Hoaiza ny ezaka fa efa mananontanona ilay …….
Dia mankahery ny rehetra, tolona hiaraha-manana ity koa aoka samy HISIKINA izay tandrify azy avy e!!!
TSY KIVY!!!tsy maintsy mitraka!homba antsika Andriamanitra e!
Raha te hitarika ny tolona dia tokony ho matotra. Fahadisoana no nidirana tao @ tetezamita sandoka io, fa rehefa tafiditra kosa dia tokony mba hanao zavatra. Aiza ve ka resaka tsy misy fotony no atao eny @ MAGRO ary ny fivavahana no mameno ny banga. Maninona moa raha asiana fotoana ho filazam-baovao, asiana fotoana ho fihainoana ny vahoaka, izany hoe mandray ny fitenenana ny olona, asiana fotoana hihaoan’ny vahoaka sy ireo lasa niditra ao @ fitondrana. Ary indrindrindra, mba hasiana hetsika mivangana sy mafonja ka mampiova ny toe-javatra. Toa nofy fotsiny anefa izany. To ahanatena ny SADC fotsiny, nefa anie Raha tsy misy ireo ra-mandriaka irony tsy hisy izany fidiran’ny SADC an-keriny izanye. i Ramalagasy anefa matahotra ra- mandriaka. Ny fanotaniana dia ny hoe FA HANAO INONA IHANY E ? jereo ny tany Egypte fa mihetsika ny olona ary tena manohitra. My Gasy matahotra ny figadrana, nefa omby olona firy ny figadrana ?
Farany, ho anareo mpitarika ao @ MAGRO. Aza fitahina i Dada fa ianareo no hiaran’ny hatezeran’ny Zanak’i Dada aoriana kely ao. Nefa dia azo hialana dieny izao izany . aza atao intsony ohatra ny manilika fa efa be izay voahilika izay (GTT, PSD, FRDL, VAMI, VOT…)mahaiza koa miara-miasa na dia mandram-pianjeran’i Bitro -voalavo fotsiny aza, @ ireo mpanohatra an-dRajoelina, ny ankolafy Zafy ohatra… Ary aza maika @ fety krisimasy sy taom-baovao izany fa mihetsika foana
Ny vaovao any amin’ny gazety aza mampieritreritra ihany !
Toa nahita an’izao aho androany : L’Union européenne attend les recommandations de la Sadc !
Fa iza no miandry an’iza marina ê ? Ny vahoaka tompon-draharaha miandry an’iza sa miandry inona koa ?
7 décembre 2012 à 18 h 39 min
Tsy dia azo hinoana daholo izay voalaza any @ Gazety Kintana a!!
aza dia maka « L » loatra.
Précédent Article précédent : ME RASAMIMAKA MAHEFALAHY : TSY MAINTSY AVERINA AMIN’NY TOMPONY ARA-DALANA NY TANY REHEFA TONGA NY FOTOANA
Suivant Article suivant : Les évènements du Sud en 2012 : Dimensions juridiques. par le professeur Raymond Ranjeva